Nala soo xiriir - Shanghai May Maqaarka Macluumaadka Teknolojiyada Co, Ltd.
Cinwaanka: Lambarka 479, Wadada Youdong, Minhang Dist., Shanghai, Shiinaha
Waxaan haynaa koox injineernimo xirfad leh oo u adeegta baahi kasta oo faahfaahsan. Ha ku qancin inaad wax na weydiiso. Toos noo soo dirinfo@meicet.com ama naga soo wac 400-8608-187. Intaa waxaa sii dheer, waxaan soo dhaweyneynaa booqashooyinka warshadeenna ee adduunka oo idil si aad ugu wanaagsan aqoonsiga shirkadeena. Ganacsiga aan la leenahay ganacsatada dhawr dal, waxaan inta badan raacnaa mabda'a sinnaanta iyo ka wada faa'iidaysiga. Waxaan rajeyneynaa inaan suuqgeyno, dadaal wadajir ah, ganacsi iyo saaxiibtinimo si aan uga wada faa'iideysano. Waxaan rajeyneynaa inaan helno weydiimahaaga.